Ibonwe kangaphi 1,694 (Ama)Ixesha #Umnqophiso Omtsha #ISabatha #IPasika
IBhayibhile Sisimemo uThixo Asithumele Ebantwini
Kufuneka siqonde ukuba umthetho ngamnye kaThixo wamiselwa usindiso lwethu, kwaye sisimemo esiqulathe uthando lukaThixo. Ngoko ke, kufuneka siyigcine yonke imithetho kaThixo ngokupheleleyo njengoDaniyeli, owathandaza ngolu hlobo “Vula amehlo am ukuze ndibone izinto ezintle kumthetho wakho.”
IBandla likaThixo Ligcina Umnqophiso Omtsha, Oqulathe Isithembiso sikaThixo
KwiLixa loMoya Oyingcwele, uKristu uAhnsahnghong noThixo uMama baze emhlabeni ukuze baxolele bonke abantu izono zabo abazenza eZulwini, bababonise indlela yokubuyela eZulwini ngokuthi babuyise iSabatha nePasika yoMnqophiso Omtsha, eyatshatyalaliswa kuMaxa Amnyama.
Wena, thetha koonyana bakaSirayeli uthi, Inene, iisabatha zam zigcineni; kuba zingumqondiso phakathi kwam nani kwizizukulwana zenu, ukuze nazi ukuba ndinguYehova oningcwalisayo; niyigcine isabatha, kuba ingcwele kuni.
Kuba umthetho woMoya wobomi, ndakuba kuKristu Yesu, wandikhulula emthethweni wesono nokufa.